တိဘက် Lhasa Apso မျိုးကွဲကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ ကမ္ဘာ့ခွေးများ
El Lhasa Apso သည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်တန်ဖိုးထားသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည် ဒီခွေးလှလှပပဝတ်ဆင်သော၎င်း၏ရှည်လျားသောကုတ်အင်္ကျီကြောင့်အလှတရားအလှမယ်၌တည်၏။ ဒါပေမယ့်ဒီလုပ်ဆောင်မှုအသစ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာတိဗက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းမျိုးနွယ်စုများအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပါ။
Lhasa Apso သည်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခွေးများကိုတန်ဖိုးထားသောကြောင့်မျိုးဆက်ကိုရာစုနှစ်များစွာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဤခွေးငယ်လေးသည်ယနေ့လူအမျိုးမျိုးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောလက္ခဏာရှိပြီးသူ၏မိသားစုနှင့်တွဲဖက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီတိဗက်ဇာစ်မြစ်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ.
1 Lhasa Apso ၏သမိုင်း
4 Lhasa Apso ကျန်းမာရေး
6 ဘာလို့ Lhasa Apso ရှိသင့်တာလဲ
Lhasa Apso ၏သမိုင်း
Lhasa Apso ခွေး ၎င်းသည်၎င်း၏အမည်ကိုတိဘက်ရှိ Lhassa တွင်တည်ရှိသည်။ ခွေးသည်တိဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အလွန်အရေးပါပြီး၎င်း၏ဇာစ်မြစ်သည်ခရစ်တော်မတိုင်မီနှစ်ပေါင်းရာချီကတည်းကတည်ရှိသည်။ ဤခွေးငယ်သည်ကြီးသောအုပ်ထိန်းသူအရည်အသွေးများရှိသည်။ အရွယ်အစားကအထင်ကြီးစရာမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အကျွမ်းတဝင်အဖော်များ၏အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်သည် တိဘက် Mastiffsသူသည်သူစိမ်းများရှိနေခြင်းကိုအခေါက်ဖြင့်သတိပေးခဲ့သည်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်အပြင်၎င်းခွေးကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသောကြောင့်အလွန်ကောင်းသောလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အရေးကြီးသောများစွာသော ည့်သည်များကို Lhasa Apso ခွေးကိုပေးခဲ့သည် လေးစားမှု၏လက္ခဏာသက်သေအဖြစ်။ ဤသည်မှာခွေးသည်မြင့်မြတ်သောမိသားစုများစွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်ခွေးသည်ဤလက္ခဏာများအချို့ရှိသော်လည်းအစောင့်ခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်တော့သော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးကိုအဖော်ခွေးများအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ရဲ့အမွေးထူရှည်၊ ရှည်လျားလှတဲ့အမွေးအလှအတွက်ပြိုင်ပွဲတွေကိုသူတို့အရမ်းသဘောကျတယ်။
Lhasa Apso ကိုခွေးငယ်လေးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်သေးသေးလေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ The ညှိုးနွမ်းညှိုးနွမ်းသောအမြင့်တွင် ၂၅ စင်တီမီတာရှိပြီးအများအားဖြင့် ၅ မှ ၇ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။ ဆံပင်ရှည်နှင့်ထူထပ်သောအရည်အသွေးရှိပြီးခေါင်းတွင် whiskers နှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သော်လည်း၎င်းသည်အတော်အတန်အားကောင်းပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ၎င်း၏နှာခေါင်းတိုသည်နှင့်၎င်း၏စကားရပ်များသောအားဖြင့်ဖော်ရွေသည်။ ခွေးတစ်ကောင်သည်အမြဲတမ်းရှည်လျားသောခွေးထက်ပိုရှည်သည်။
ဒီခွေးထဲမှာတစ်ခုခုထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဆံပင်ပဲ။ ၎င်းကိုကြီးထွားရန်ခွင့်ပြုလျှင်၎င်းသည်အလွန်ကြီးသောအရှည်သို့ရောက်ရှိပြီးမျက်နှာပေါ်တွင်မျက်လုံးများမှမြိတ်ကဲ့သို့ကျလိမ့်မည်။ သို့သော်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သူတို့၏သားမွေးများကိုဖြတ်တောက်ရန်ကြိုးစားသူများရှိသည်။ ဒီအမှု၌ခွေးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအသွင်အပြင်ရှိလိမ့်မည်။ အရောင်နှင့်စပ်လျဉ်း ကုတ်အင်္ကျီကိုပျားရည်၊ သဲ၊ ရွှေ၊ မီးခိုးရောင်၊ အဖြူ၊ အနက်ရောင်သို့မဟုတ်နှစ်ရောင်စပ်အရောင်များနှင့်ရောစပ်နိုင်သည်.
Lhasa Apso ကိုသတ်မှတ်ထားသည် အရမ်းရွှင်လန်းခြင်းနှင့်သွက်ခွေးမိသားစုရဲ့တစ်နေ့တာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သူသည်မိမိနှင့်အလွန်ရင်းနှီးပြီးထိုနှစ်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသူအဖြစ်အကာအကွယ်ပေးသည်။ ခွေးတစ်ကောင်ဟာသူစိမ်းတွေနဲ့ဂရုမစိုက်နိုင်လောက်အောင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချမယ်ဆိုရင်ထာဝရမိတ်ဆွေတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဤအသေးအဖွဲခွေးအမျိုးအစားများသည်သခင်၏နောက်လိုက်များဖြစ်ကြောင်းပြောသင့်သည်။ သို့သော် Lhasa Apso သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် ပိုပြီးလွတ်လပ်သောဇာတ်ကောင်နှင့်အတူခွေး, အချိန်များတွင်အတန်ငယ်ခေါင်းမာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေမည်ဖြစ်သော။ သူ၌ကြီးမားသောအရည်အသွေးများနှင့်ဥာဏ်ရည်ရှိပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုများစွာသင်ပေးနိုင်သော်လည်းစိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောပညာရေးဖြင့်အမြဲတမ်းသင်ကြားပေးနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာခွေးတစ်ကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ် သင်နှစ် ဦး စလုံးအိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေနိုင်ပြီးကုမ္ပဏီကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ် မင်းရဲ့ ကလေးများအား ၄ င်းတို့၏နေရာလွတ်ပေးရန်သင်ကြားပေးရပါမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွေးကောင်းတစ်ကောင်ကိုခံစားနိုင်သည်။
Lhasa Apso ကျန်းမာရေး
Lhasa Apso သည်ခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့အားလုံးသောသံကျန်းမာရေးကိုပြသပြီးသက်တမ်းရှည်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အရေပြားပြproblemsနာအချို့ရှိနိုင်သည်။ Hip dysplasia သည်လည်းကျောက်ကပ်ပြproblemsနာများပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသည့်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာတစ်ခုမှာခွေးမျက်စိမမြင်သည့်တိုးတက်သောလွှာကျုံ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အ အဆိုပါ VET မှာပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ သူတို့ဟာအထူးသဖြင့်ရှစ်နှစ်၊ ကိုးနှစ်အကြာမှာခွေးအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့အခါပြproblemsနာတွေပိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဆံပင်များရှည်လျား။ ခွေးများအားကပ်ပါးကောင်အမျိုးမျိုးမှ ၀ င်ရောက်ကာကွယ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်နှင်းရည်ဖြန်းခြင်းဖြင့်သင်သည်အထူးဂရုစိုက်ရမည်။
Lhasa Apso ကိုပိုင်ဆိုင်သောပိုင်ရှင်များကိုစိတ်ပူစေသောအရာတစ်ခုမှာ သူတို့ရဲ့သားမွေး၏စောင့်ရှောက်မှုဖြစ်ပါတယ်, သောဆက်ဆက်အလုပ်တွေအများကြီးကြာပါတယ်။ ၎င်းသည်အထူနှင့်ဖြည့်တင်းရုံသာမကခွေး၏အရွယ်အစားအတွက်လည်းကြီးမားသည်။ ပြသသည့်ခွေးများသည်များသောအားဖြင့်လုံး ၀ ဂရုစိုက်ပြီးအလွန်ရှည်သောဖြောင့်သောဆံပင်ကိုဝတ်လေ့ရှိသည်။
a ရှိသည်သောခွေး၏အမှု၌ ပိုပြီးတက်ကြွသောဘဝကျိန်းသေဆံပင်ဖြတ်ဖို့အကြံပြုသည် မကြာခဏ။ ၎င်းသည်ခွေးများအတွက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးခွေး၏ဆံပင်များမှအထစ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောအရာများကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည်။ ဆံပင်ကိုခွေးနှင့်အဆင်ပြေစေမည့်အရွယ်အစားဖြင့်လည်းလည်းသန္ဓေသားပြုခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်၌အခါအားလျော်စွာယင်းကိုသာဖြိုခွဲရမည်။
ဤသည်ခွေးဒါအတော်လေးတက်ကြွဖြစ်ပါတယ် သင်၏နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်မှုများလိုအပ်လိမ့်မည်။ အခြားဝတ်ရည်များကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသည်အလွန်အားကစားသမားမဟုတ်သော်လည်းကစားကွင်း၊ လူမျိုး၊ ရှည်လျားသောလမ်းလျှောက်ခြင်းများတွင်ပျော်မွေ့လိမ့်မည်။ ပူပြင်းသည့်နေ့များတွင်သင်သတိထားရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မြင့်မားသောအပူချိန် (သို့) အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်အသက်ရှူကျပ်သည့်မျက်နှာပြန့်လွင့်နေသောမျိုးပွားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘာလို့ Lhasa Apso ရှိသင့်တာလဲ
El Lhasa Apso သည်အကောင်းဆုံးအဖော်ခွေးဖြစ်သည်။ ဒါဟာတိုက်ခန်းများနှင့်အိမ်များအတွက်မှန်ကန်သောအရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်လွတ်လပ်ပြီးစမတ်၊ အမြဲတမ်းဂရုစိုက်စရာမလိုသည့်ထိုခွေးအမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်မှန်ကန်သောခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အဆိုပြုသောအခါခေါင်းမာလာနိုင်သည့်မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အမြဲတစေဆုံးမပဲ့ပြင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရရမည်။ သင် Lhasa Apso မျိုးကိုကြိုက်လား?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးမျိုးဆက်များ » လာဆာ Apso